Mitsara yevamwe vanyori vakazvarwa muna Chikunguru. | Zvazvino Zvinyorwa
Mitsara yevamwe vanyori vakazvarwa muna Chikunguru.
July Ndiwo mwedzi wangu, ndosaka nhasi ndichidonha 47 imwe mushure meimwe. Saka ini ndinomhanya kuburikidza mashoma vanyori avo vakazvarwawo mwedzi uno na mamwe emitsara kuti vakataura kana kunyora. Kune mamwe akawanda, asi Ini ndinosiya vaviri kana matatu makuru mazita izvo zvinokodzera zvinyorwa zvavo.
1 2 yeJuly
2 4 yeJuly
3 5 yeJuly
4 8 yeJuly
5 9 yeJuly
6 10 yeJuly
7 11 yeJuly
8 12 yeJuly
9 15 yeJuly
10 16 yeJuly
11 17 yeJuly
12 20 yeJuly
13 21 yeJuly
14 22 yeJuly
15 23 yeJuly
16 24 yeJuly
17 26 yeJuly
18 27 yeJuly
19 29 yeJuly
20 31 yeJuly
Herman Washington, Munyori weGerman, akahwina mubayiro weNobel muna 1946.
“Nyoro ine simba kupfuura yakaoma; mvura yakasimba kupfuura dombo, rudo rune simba kupfuura mhirizhonga ”.
“Ndini novel. Ndiri nyaya dzangu ”.
"Kunyora ndekwekuti varege mumwe achichema nekuseka ega."
"Ndeupi mutorongo wakasviba kupfuura moyo pachawo?" Ndeupi murindi wejeri asinganetsi kupfuura iwe?
Kunyora kupukunyuka kubva munyika. Ndinoda kuva ndoga mumba. Iyi ingangoita nzira yekufungisisa, kuongorora kwehupenyu hwangu ".
"Victor Hugo aive mupengo achizviti Victor Hugo."
"Uropi hwese hwenyika hauna simba kurwisa chero hupenzi huri mufashoni."
“Oo, zvese izvi zvinogona kubatsira kuratidza kuti, kunyangwe vane hasha dzimwe nguva vachiunza nhamo kune vakanaka, simba ravo rinopfuura uye chirango chavo ndechechokwadi; uye kuti vasina mhosva, kunyange vakadzvinyirirwa nekusaruramisira, vachitsigirwa nemoyo murefu, vanogona pakupedzisira kukunda pamusoro penhamo!
"Rwendo rwechokwadi chete rwekutsvaga harune kutsvaga nzvimbo nyowani, asi nekutarisa nemeso matsva."
“Mashoko acho, wakisi; simbi inoshanda. "
"Pamberi parudo, mari, kutenda, mukurumbira uye kururamisira, ndipei chokwadi."
“Mabhuku anonyanya kukubatsira ndeaya anoita kuti ufunge zvakanyanya. Bhuku rakakura nemufungi mukuru mudziyo wekufunga, uzere nerunako uye chokwadi ”.
"Mwari, dai Aivapo, aiseka zvisikwa zvake."
"Miti ine hupenyu hwakavanzika hunongoziviswa kune avo vanoikwira."
"Pasina kupokana rudo rwakangwara ruri nani, asi zviri nani kuda kupenga pane kushaya rudo rwese."
"Sekungofanana nemufambisi wengarava uyo anodzikiswa nemhepo ine simba anotarisa mwenje miviri yedenga rehusiku, zvimwe chete, mudutu rangu reRudo, ndinotarisa mwenje miviri pachiratidzo chakajeka chandinowana nyaradzo yangu chete."
"Unondida, asi hausati wazviziva."
"Kutsvoda kwekutanga mashiripiti, wechipiri wepedyo, wechitatu maitiro."
"Hana haititadzise kuita zvivi, asi zvinosuwisa kuti tinozvifarira."
"Dai ndiri mukadzi ndaipererwa." Kuvapo kwevakadzi vakanaka kunodarika varume vakavakodzera ”.
“Kana iwe ukavaka dzimba mudenga, rako basa harirasike; zvino isa zvigadziko pasi pazvo ”.
“Mumoyo make aive nemunzwa weshungu. Ndakakwanisa kuibvarura rimwe zuva: Ini handichanzwe moyo wangu ”.
“Shoko iri ndicho chinhu chakanakisa kusikwa, ndicho chakakosha kudarika zvese zvatinazvo isu vanhu. Izwi ndiro rinotiponesa ”.
"Munguva dzedambudziko rechokwadi nedzidziso, chii chingave chedu pasina madimikira uye zvisina hunhu?"
“Mhirizhonga yekuAmerica hupenyu hweveruzhinji, inova nzira yehupenyu hweveruzhinji, yakave fomu, chimiro chenyaya yemutikitivha. "Saka ndinofanirwa kufunga kuti chero nhamba yevanyori vatema inofanira kuiswa muchimiro chenyaya yemutikitivha."
"Zvakakosha kuyeuka kuti tese tine mashiripiti mukati medu."
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Mitsara yevamwe vanyori vakazvarwa muna Chikunguru.
Chikunguru izere nevanyori vakanaka! Kutenda nekuunganidzwa kwemitsara
Iwo mayunivhesiti eMadrid anopemberera gore rechimakumi mashanu regumi rimwe reMakore Makore ega mega